United Airlines: Magetsi Ndege Yakagadzirirwa Kutora Ndege na2026
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines: Magetsi Ndege Yakagadzirirwa Kutora Ndege na2026
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Heart Aerospace iri kuvandudza iyo ES-19, 19-chigaro chemagetsi ndege ine mukana wekubhururuka vatengi kusvika kuma250 mamaira pamberi pekupera kwegumi rino.
Ndege dzemagetsi dzakagadzirirwa kutiza pasi pezvibvumirano zvitsva neUnited Airlines Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Mesa Airlines uye Heart Aerospace.
United Airlines inosaina chibvumirano chekutora zana reMoyo Aerospace's ES-100 ndege, 19-chigaro chemagetsi ndege ine mukana wekugadzirisa dunhu rekufamba nendege.
United Express mudunhu mudiwa, Mesa Airlines, zvakare inosaina chibvumirano chekuwana zana dzendege dzemagetsi.
United Airlines Ventures (UAV) yazivisa nhasi, pamwe neBreakthrough Energy Ventures (BEV) uye Mesa Airlines, akaisa mari mumagetsi emagetsi ekutanga Mhepo Aerospace. Mwoyo Aerospace iri kugadzira iyo ES-19, 19-chigaro magetsi magetsi ane mukana wekubhururuka vatengi kusvika mazana mazana maviri nemakumi mashanu gore risati rapera. Pamusoro pekudyara kweUAV, United Airlines yakabvumirana kutenga 250 ndege ES-100, kana ndege yacho yangosangana nekuchengetedzeka kweUnited, bhizinesi uye zvinodiwa. Mesa Airlines, United inokosha yekudyidzana naye mukuunza ndege dzemagetsi mukushambadzira, yabvumawo kuwedzera 19 ndege dzeE-100 mungarava dzayo, zvichiteerana nezvinodiwa zvakafanana.
UAV iri kuvaka portfolio yemakambani anotarisa pane matsva ekuchengetedza pfungwa uye kugadzira matekinoroji uye zvigadzirwa zvakakosha kuvaka kabhoni-isina kwendege nendege uye kusvika United's net-zero greenhouse gasi emissions zvinangwa. Nechibvumirano chitsva ichi, United iri kuwedzera kuzvipira kwadzo kushinga kudzikisa gasi inokanganisa gasi inosvika 100% na2050 isingavimbe netsika dzekabhoni, pamwe nekugonesa kukura kweAerospace uye kutora chikamu mukugadzira nendege izvo zvinoderedza gasi rinokanganisa kupisa kubva pakubhururuka.
“Breakthrough Energy Ventures ndiro izwi riri pamberi pevashambadziri vari kutsigira kugadzira michina yemagetsi yakachena. "Tinogovana maonero avo ekuti isu tinofanirwa kuvaka makambani ane mukana chaiwo wekushandura mashandiro anoita maindasitiri uye, kwatiri, zvinoreva kuti kuisa mari mumakambani akaita seHeart Aerospace iri kugadzira ndege inoshanda nemagetsi," akadaro Michael Leskinen, Mutevedzeri weMutungamiri weUnited Corp Kubudirira & Hukama Hwehukama, pamwe neMutungamiri weUAV. “Tinocherekedza kuti vatengi vanoda kunyangwe varidzi vezvinhu zvavo zvekabhoni. Isu tinodada kudyidzana neMesa Air Group kuunza ndege dzemagetsi kune vatengi vedu pakutanga kupfuura chero imwe ndege yeUS. ”Mutungamiri mukuru weMesa, Jonathan Ornstein aratidza hutungamiriri mune zvekuona nendege ine magetsi.”
UAV neBEV ndevamwe vevatangi vekutanga muMoyo Aerospace, zvichiratidza kuvimba mumoyo dhizaini uye kugadzira mukana weMoyo wekutsvagisa iyo ES-19 sumo kumusika kutanga 2026.
“Zvekufamba nendege chinhu chakakoshesa hupfumi hwenyika. Panguva imwecheteyo, ndiyo sosi yakakosha yekubuditsa kabhoni uye chimwe chezvikamu chakaomesesa kuita decarbonize, "akadaro Carmichael Roberts, Breakthrough Energy Ventures. “Tinotenda kuti ndege dzemagetsi dzinogona kuve neshanduko mukudzora kuburitsa kweindasitiri, uye nekugonesa yakaderera mutengo, yakanyarara uye yakachena kufamba kwenzvimbo pamwero wakakura. Chikwata chevanoona nezveMoyo chiri kugadzira ndege yakatenderedza tekinoroji yemagetsi yemagetsi inobvumidza nendege kushanda nemutengo wakaderera wemazuva ano uye dzinogona kuchinja nzira yatinofamba nayo. "